Rice kuyinto wokudla kakhulu. It kahle zidla usawoti, kanjalo ngcono umsebenzi ngokuhlanganyela. Izidlo nale wokudla edliwayo kaningi njengoba kudingeka, basuke kahle amuncwa wumzimba futhi okunenzuzo ukuba isimiso sokugaya ukudla bungene. Kukhona ngisho ukudla okukhethekile impilo, okuye kwathuthukisa ukuphila jikelele kanye nokusetshenziswa irayisi izingane kuthinta ukuthuthukiswa yabo yobuchopho.
Ilayisi iphalishi kuyinto isidlo ahlukile ingalungiswa nge excipients ahlukahlukene ukusuthiswa inyama, inkukhu, izithelo. Abantu abaningi kakhulu othanda irayisi, isakhi esiyinhloko kuba irayisi. By the way, nice and a risotto imifino nge imifino. Fig abavumelani ngokuphelele ngenombolo enkulu yemikhiqizo, ngisho ne izinhlanzi. imiqulu Japanese futhi sushi, futhi, ibhalwe kusuka irayisi, ngasendleleni, eJapane, lokhu imbiza ngokuvamile ukudla okuyisisekelo.
Ubisi irayisi iphalishi uphelele ingane ukudla. A irayisi kahle eliphekwe ngobisi, wagcoba ngokusebenzisa ngesihlungo noma blender wabhaxabulwa, okuphelele ngisho izingane. Ilayisi eliphekiwe ingasetshenziswa njengendlela ofakwe amaqebelengwane ophaya, njengoba side izitsha ngisho nama-dessert - kuhle kakhulu Pudding irayisi.
Indlela ukupheka irayisi iphalishi? Okokuqala, udinga ukuya ngokucophelela ngokusebenzisa wokudla ezomile, susa konke risinki amnyama kanye eseliphuphile. Khona-ke kahle siyakazwe ukugijimela emanzini izikhathi ezimbalwa kuze amanzi kucacile. Ngakho retracts isitashi ngokweqile kanye wokudla uthole crumbly futhi okumnandi. Ilayisi iphalishi ukuba ukwenziwa zisebenzisa amanzi amaningi, isilinganiso elilodwa kuya kwamabili. Ilayisi kumele kwehliswe emanzini abandayo bese ukubeka imbiza phezu komlilo. Omama abaningi abasemakhaya wokushiswa iphalishi, bese ungafuni ukupheka. Kukhona imfihlo kancane azosiza ugweme lokhu.
Ilayisi iphalishi, okungadingi unamathele
- irayisi, wathutha wageza emanzini eziningana - eziyikhulu amagremu;
- ibhotela - isipuni;
- vanilla ushukela nesinamoni (mawuthanda);
- noshukela ukunambitha;
- Ubisi - cishe ilitha.
Beka i-pan phezu komlilo, futhi ekuvuseni kulo ucezu ibhotela. Bahlanza irayisi (kufanele sokukhipha kahle colander), uthele epanini, uhlanganise ibhotela encibilikisiwe, engeza ingcosana elincane usawoti, vanilla ushukela bese uthele ubisi. Cover ngesivalo, imenze ethumbeni. Leli phuzu libuye akumelwe lingabi nawo, ubisi ngokushesha ngokulambisa. Ngemva abilayo, wenza umlilo ubuncane uvala isivalo Friend futhi ushiye imizuzu amabili. Ngemva kwalokho, edonsa noshukela ukunambitha, uhlanganise Ake kahle kuphole kancane. Abeke phezu ipuleti futhi wamangala lapho ethola ukuthi liphalishi is hhayi wokushiswa phansi pan!
Wonke umuntu uyazi iresiphi pilaf empumalanga, kodwa bambalwa abantu bazi ukuthi irayisi, inyama, izaqathe kanye anyanisi ingalungiswa esitsheni Russian ngempela - obukhulu, ocebile futhi elimnandi irayisi iphalishi nge inyama. Lokhu dish ubizwa nangokuthi Field iphalishi, kwanelisa kakhulu futhi esihlwabusayo. Ilungiselela iphalishi nge inyama eside, ukulangazelela, ngenxa inyama selithamba, utshani elimnandi.
Ilayisi iphalishi nge inyama, iresiphi for the izimbiza ezine-litre
- Ilayisi - amabili nendebe isigamu;
- ingulube (ungathatha yenkomo abasha noma 50/50) - eyodwa kilogram;
- izaqathe - izingcezu ezimbili naphakathi;
- Anyanisi - izingcezu ezintathu;
- amafutha yemifino - kancane;
- pepper amnandi, phansi abamnyama;
- umfire - amayunithi 2.
- Salt - okungenani ezimbili wezipuni irayisi "uthando" usawoti.
Inyama kufanele wageza futhi uthathe cubes ezincane. Anyanisi uthathe izindandatho uhhafu. Epanini (kangcono ukuthatha ngeketela noma pan nge ngezansi obukhulu) uthele amafutha bese efakwa anyanisi oqotshiwe. On emlilweni ophansi, Fry onion kuze esobala, wagqoka inyama yakhe, pepper kanye usawoti kancane. Igeleze isigamu ilitha amanzi ashisayo kuso. Bilisa futhi ibila ngeke amahora esingaphansi kwezinsuku ezimbili. Ngalesi sikhathi, iphume sibalo omuhle, shiya ke sokukhipha e colander. Carrot ikhasi grate. Uma amanzi kuso iyoba shabalala kakhulu, uzodinga gcwalisa it. Ngemva kwesigamu sehora lenyama ephekiwe kuso yabalingisi laurel isanqante. Dolem amanzi ukuze amboze inyama nemifino lingaphezulu ngo-amane iminwe. Pheka kuze kuphele isigamu sehora.
Khona-ke ukubeka irayisi wageza ukuba inyama ngisho amanzi dolem, futhi kuze iminwe ezine. Ucime isidlo cishe ihora at ukushisa low, ibangele ngezikhathi ezithile, futhi uzama usawoti. podsolit uma kunesidingo. Lapho irayisi usulungile, udinga ukucisha umlilo, ibhodwe eceleni futhi ngokucophelela ukugoqa ithawula noma ingubo encane. Ngo enjalo noma insima elayisi inyama kusamelwe ke amahora amabili. Lokhu dish olungenakuqhathaniswa, elimnandi futhi ezihlwabusayo kakhulu! Bon appétit!
Okunomsoco iphalishi Field: zokupheka
Ukuthuthukiswa kwengane ngezinyanga ukuya ngonyaka. Izigaba ezibalulekile zokuthuthukiswa kwengqondo nengokomzimba kwengane ngaphambi konyaka wokuphila
Izigaba Isayensi desmurgy - izidakamizwa, evikelayo ingcindezi ibhandishi